Nakhu abantu abashoyo ngentengo eyodwa yentwasahlobo yentwasahlobo
Usezinhlungwini. Lapho uDaley ehlupheka ephila, u-Edison wamgcina ekhokhelwa kuze kube lusuku afa ngalo, futhi wanakekela zonke izindleko. Ekuqaleni kwekhulu lama-20 th, ake ngikuqinisekise ukuthi akuwona umkhuba ojwayelekile ukugcina abasebenzi abangakwazi ukusebenza kubakhokheli.
Ngasohlangothini lwe-chestnut olungu-1100 lokungena emnyuziyamu, izindonga ezimnyama zibonisa, futhi izibonakaliso zibukeka zibukeka ngamehlo. Lesi ngesinye sezizathu zokuphikiswa. Ama-crusaders anomdlandla, okubandakanya owake waba yikhansela ledolobha laseWarrett Kertett Kernett, ahlasela amalambu we-neon. \_ "KuneZwi elidumile elivela eWreyett Kennedy ngeVancouver elomuzi wemvelo, idolobha akufanele libe yimvelo, imvelo kufanele ibe yidolobha, \_" kusho uchwepheshe we-neon uJohn AKIN.
Kusukela lapho, amalunga e-Red Sauce kanye nezindawo zokudlela ezimhlophe zethebula ezimhlophe namakhulu kukhona yonke indawo. Namuhla, ilebula legolide likhiqizwa yiZalto, e-Austria. Yini ukhiye we-Brand Design Impumelelo? I-Exquisite Paper Bowl ihlangana newayini futhi ayinakubonwa. Ngamanye amagama, cishe asikho isithiyo phakathi komthengi kanye ne-ethereal white burgundy.